ကိုယ့်ပြည် ကိုယ့်ရွာက လှလှပပ မြင်ကွင်းများကို မလွမ်းပဲ ဘာလို့ များ အနိဌာရုံနီးပါး အော်ဂလီဆန် မြင်ကွင်းများကို ရွေးချယ် လွမ်းနေရတာလည်း ဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်မိတယ် ။ လွမ်းတာကို နာတာ နဲ့ဖြေရတယ် လို့ ကြားဖူးနားဝ ရှိတာမို့နာစရာမြင်ကွင်းများကို ဆက်လက် ဖေါ်ပြချင်မိတယ် ။ ရင်နာတာရယ် စိတ်နာတာရယ် ဘယ်လိုခွဲခြား စိတ်ဖြာ ရမယ်မှန်း မသိလို့ရောပြီး တင်ပြလိုက်ပါတယ် ။လွမ်းချင်သူများ၊ နာချင်သူများ ဆက်လက်ကြည့်ကြပါရန် ။
ရန်ကုန်မြို့ လည် အမှိုက်ပုံဝယ် ။ ဗဟိုတရားရေးရှေ့ နေ ရုံးချုပ်ကြီးနဲ့မနီးမဝေး ။ ဘဏ်တိုက်ကြီး ရဲ့ ဘေး၊ လမ်းမတိုလေး တခု ၊( ဟိုဘက် ဒီဘက် ကားလမ်း မပေါက် ၊ကားဖြတ်ကူးလို့ မရ ။ ဒီကားတွေ ဒီနေရာ မှာ ဒီလိုရပ်ထားပြီး ဒီအလုပ်တွေ လုပ်ကြရတယ်။
နိုင်ငံတခုရဲ့တိုးတက် ဖွံ့ ဖြိုးမှုကို ဘာနဲ့ တိုင်းတာ မလည်း ။ စီးပွားရေး ၊ ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေး ။ အစရှိတဲ့အရေးတွေ က အဓိက ကျပါလိမ့်မယ် ။အဲဒီအချက်တွေ မပြေလည် မပြည့်စုံသ၍ ကျန်တဲ့ အခြေခံ အဆောက်အအုံ ဖြစ်တဲ့လူမှုရေး ၊ ယဉ်ကျေးမှု ဆိုတာ တွေ ဘယ်လိုမှ တိုးတက် မြင့်မားမယ် မထင်မိပါ ။ တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဝင်ငွေ ၊ အနိမ့်ဆုံး ဝင်ငွေ ရရှိ စားသောက်နေကြရသူ ပြည်သားများ ရွာသားများရဲ့ဘဝတွေ ဒီလို အခြေအနေထိ ဖြစ်နေကြရတယ် ။ အမှိုက်ထဲက ရွှေ ဆိုတာ သူတို့လေးတွေ အတွက်များ ရည်ညွှန်းထားလေသလား ။
မယုံ မရှိနဲ့။ ဒါက ရန်ကုန်မြို့ လည်ခေါင် ။ အနော်ရထာ လမ်းမကြီး ပေါ်မှာ ။ လမ်း ၄၀ ထိပ်မှာ ။( အနော်ရထာ မင်းကြီး သာ၊ခုလို မြင်ကွင်းကို တွေ့ မိရင် ..ရင်ကျိုးမလား မသိ )။ မြူနီစီပယ်( ခုခေတ်တော့ စည်ပင်သာယာ ပေါ့) မှ လူတွေ အလုပ် မလုပ်ကြဘူး လို့ဘယ်သူပြောမလည်း ။ လုပ်နေကြပါတယ် ။ မိုးလေးနဲနဲ ရွာတာနဲ့ရွှေဂုံမြို့ လမ်းမကြီးတွေ ရေလျှံတယ် လို့ ပြောကြလွန်းလို့ပိတ်နေတဲ့ရေမြောင်းတွေကို လာပြီး ဖေါ်ပေးသွားခဲ့ကြပါတယ် ။ သူတို့ ဌာနက ရေမြောင်းဖေါ်ရုံပဲလေ။ဒီတော့ မြောင်းဖေါ်ပေးပြီးရင် တာဝန်ကျေပြီပေါ့ ။ လမ်းပလက်ဖေါင်းပေါ်က ကိစ္စ သူတို့ နဲ့ မဆိုင် ။ နောက်တမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ် ။ မြေ ဆွေး မြေသြဇာ ရအောင်များစေတနာနဲ့ ပြုလုပ်ထားပေးလေသလား ။ ဝိုင်းဆုခိုင်သိမ်း ရဲ့ “ လမ်းမကြီးရဲ့ ဘေး ” သီချင်းလေး ကို သတိရလိုက်မိတယ် ။ အနီးအနားရှိ လဖက်ရည်ဆိုင်လေးများကတော့ အိနြေ္ဒမပျက် စည်ကားလျှက်ပါပဲ ။
ဒါလေးများ ။ ဒီခလုပ်ကန်သင်း နဲ့ အမှိုက် တွေ လောက်ကတော့ ရိုးနေပါပြီ ။ ခုန်ပျံကျော်လွှား အားကစား လ မို့ ချွေးလေးစို့မှ နေတတ်ကြတဲ့ ရွာသူရွာသားများ ။
ရုံးကိစ္စများကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင့်နေကြရတဲ့ တို့ ရွာသားများ ။ သည်းခံခြင်း ခန္တီပါရမီ အပြည့် အဝရှိနေကြပါပြီ ။ ဒီထက်မက အရေးကြီးလှတဲ့အရေးတွေကိုတောင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အောင့်အည်းစောင့်စား နေခဲ့ကြတာပဲလေ ။ အနေတတ်ရင် မြတ်ပါတယ် ။ ဖြေးဖြေးပေါ့ ။ ဆန္ဒတွေ မစောကြစေချင်ပါ ။
ရာစု နှစ် တစ်နှစ် ကို အံတုကျော်ဖြတ်လာခဲ့တဲ့ဂန္ဓီရုံးကြီး ။ ဒုတိယထပ် ။ စာချုပ် ၊ စာရွက် စာတမ်း အမျိုးစုံကို တရားဝင် စာချုပ်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ပေးတဲ့ဌာနကြီး တခု ။ ရှေးခေတ်အဆောက်အဦးမို့ကျွန်းသစ် အစစ်တွေနဲ့ ဆောက်လုပ်ထားခဲ့တာမို့ဒီလောက်ထိ တောင့်ခံ နေနိုင်တာ ။ လမ်းလျှောက်လိုက်ရင်တော့ ကြမ်းပြင်က သိမ့်သိမ့် ငြိမ့်ငြိမ့်လေး နဲ့အရသာတမျိုးပေါ့ ။ ခေါင်မိုးကမလုံတော့ .... အင်း ဒီလိုလဲ ပြောလို့ မရသေးပါဘူး ။ အပေါ်ထပ်ရဲ့ကြမ်းခင်း( ဒီအထပ်ရဲ့ အမိုးက မလုံတော့ ) သဲတွေ ဖုန်တွေ အမှိုက်တွေက ဘယ်လောက်တောင်များ ကျနေသလည်း ဆိုတာ အခန်းထဲမှ ခေါင်မိုး နောက်တထပ်ကိုကြည့်တာ နဲ့ သိသာလှပေါ့ ။ မတတ်နိုင်ပါဘူး ။ရှေးဟောင်း အဆောက်အဦ ဆိုတော့ ပုံမပျက် ထိန်းသိမ်းကြရမယ် မဟုတ်ပါလား ။ ဒီလိုပဲ ကြည့်ကျက်လုပ်ကြရတယ် ။
ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် များ က ဒီလို ရှိပါတယ် ။ ပွဲစားရန်မှ ကင်းရှင်းရလေအောင် ဤစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာကြရမယ် ဖြစ်ပါတယ် ။ အမှန်တကယ် အစဉ်အလာ အရ စာချုပ်တခု ကို တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ရန် အချိန် ၂ ရက်မျှ ပေးရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ အရေးတကြီး လိုအပ်သူများ အခါခါ မလာရောက်နိုင်သူများ ( ကြားပွဲစား နှင့်လုပ်ပါက အမြန်ဆုံး နေ့ တဝက် နဲ့ ကိစ္စပြီးပြတ်နိုင်ပါတယ် ။ ငွေ ၃ သောင်းလောက်ပဲ အပိုကုန်ပါလ်ိမ့်မယ် )း) ။
တရားဝင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ စာချုပ်စာတန်း ၊တံဆိပ်ခေါင်း ။ အဖိုးအခတွေကတော့ ဒီအတိုင်း ၊ ဒီလောက်လေးပါပဲ ။(ဘယ်တော့ ဈေးလိုက်တက်မယ် မသိ .. မသာစရိတ်တွေ ၊ ဖုံးခေါ်ခတွေတောင် ဈေးတက်ပေးလိုက်ပြီ ဆိုတော့ )
(စာလုံးပေါင်းမှားနေတာ မျက်စိလျှင်လို့တွေ့ လိုက်မိသေး..ကွားရှင်း စာချုပ် တဲ့း) ၊။အောက်နားမှ အိတ်ဖွင့်သေတမ်းစာချုပ်ဆိုတာ ကတော့ တန်ဘိုးငွေပါအောင် မရိုက်မိလိုက်ပါ ။ ဈေးတွေမတက်မှီ လုပ်စရာရှိတာ လုပ်ထားကြပါ ။ ခုလောလောဆယ် ၂၅ ကျပ် ၊ ၃၀ ကျပ်တို့နဲ့အလုပ်ဖြစ်သေးတယ် ၊ မှတ်ပုံတင်ခ ၄ကျပ် ထဲ ရယ် ။)
ဝန်ထမ်းတွေ စာရိတ္တပျက်နေကြတာ ဒါကြောင့် ပါ တဲ့ လေ။ “လပ်ပေးလပ်ယူ ဒို့ ရန်သူ” ပေါ့ ။ “ ပေးသူယူသူ လွန်ကြည်ဖြူ ”မှ အလုပ်တခု ပြီးမြောက် အောင်မြင်မှာပါ ။
“ဝန်ထမ်းကောင်းမှ နိူင်ငံကောင်းမည်” တဲ့ ။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖို့မလိုအပ်ဖူးလို့ များ ဆိုလိုချင်ပါသလား မသိပါ ။
တာဝန်ကိုယ်စီရှိကြပါသည် ။ ဆရာဘဲဥ တို့ လည်း အနားမယူနိုင်ကြရှာပါ ။ဆောင်းတွင်း နေပူပူအောက်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက် ... မီးပွိုင့်တွေတိုင်း လိုလို မီးပျက်နေကြ၍ ပိုပြီး ပင်ပန်းကြရသည်လေ ။ဟိုအဝေးမှ ထရိတ်ဒါး ဟော်တယ်ကြီးကတော့ သူပိုင်တာမို့ဘယ်သောခါမှ မီးမပျက်ပါ ။
ဆရာ ရဲ တို့ တတွေလည်း အတော်ပင်ပန်းကြပါသည် ။ အပ်တိုတချောင်းမျှ မရှိသူ ဣတ္တိယ တဦးအား စောင့်ရှောက်ပေးနေကြရ၍ အလွန် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေကြရ ပြီဖြစ်ပါသည်။
စက်မှုနိုင်ငံတော်ကြီးဆီသို့ လှမ်းတက်မြန်းရန် အရင်းအနှီးများစွာ လိုပါသည် ။ ဤနေရာတွင် မြှုပ်နှံ နိုင်ပါသည်။
mad road ( Road Map) ကြီးအား ဤသို့ ရေးဆွဲ၍ ချီတက်ကြပါစို့။
:kiki : at 1/28/2010 06:37:00 PM
မပြောမပြီး ပြောလည်းမပြီး ၊ ပြောပြန်တော့လည်း ပြောသူလွန်ရာကျပါတယ် ။ သိသာသိစေ မမြင်စေနဲ့ ဆိုတဲ့ အထဲမှာ ဒီလိုကိစ္စမျိ်ုးတွေလည်းပါ ပါလိမ့်မယ် ။ အားလုံး သိနေပြီးသား အရာတွေပါပဲ ။ မြင်ဖူးတဲ့သူတွေလည်းရှိကြမှာပါ ။ ဒါပေမဲ့ မမြင်ဖူးသေးတဲ့ သူများ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ် ။ မြင်လိုက်ရလို့ ရော ဘာတွေ အကျိုးရှိသွားမလည်း လို့ ဆိုချင်သူများ ရှိပါလိမ့်မယ် ။ ဘာမှတော့ အကျိုး မရှိသွားပါဘုး ။ အပြစ်ပြောချင်စရာတွေ သာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ။ ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ ဒီတခါ လွမ်းရတဲ့ပုံရိပ်တွေက ဘာတခုမှ မျက်စိပသာဒ ရှိစရာတွေ မဟုတ်လို့ ပါပဲ ။အမေကျော် ဒွေးတော်လွမ်း တာ မဟုတ်ရပါဘူး ၊ တကယ်ပါ ။ ကိုယ့်ပြည် ကိုယ့်ရွာမှာ ဒီလို မြင်ကွင်းတွေ တွေ့ နေရတာ စိတ်မကောင်းစရာပါ ။ ၂၁ ရာစု နှစ်ကြီးထဲမှာ ကမ္ဘာနဲ့ ရင်ဘောင် တန်း မလိုက်နိုင်တာ တောင်မှ နောက်မှာ သိပ်ပြတ်ပြီး ကျန်မနေသင့်တော့ ဘူး လို့စဉ်းစားမိလို့၊ဒီမြင်ကွင်းလေးတွေကို အားမလို အားမရ နဲ့ဖြစ်မိ ရတာပါ ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာနေခဲ့တဲ့ အတိတ်က ပုံရိပ်များနဲ့ယှဉ်ကြည့်ပြီး တိုးတက်မှု နဲ့ ဆုတ်ယုတ်မှုတွေ ကို ရေချိန်ထိုးပြီး ကြည့်လိုက်မိလို့လွမ်းရတဲ့ပုံရိပ်များ ကို ခုလက်ရှိ ပုံလေးများ နဲ့ တွေးမြင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင် ...(ပုံရိပ်ဟောင်းတွေကတော့ စုဆောင်းထားတာ မရှိလို့၊ ကိုယ်သိထားခဲ့ တဲ့ပုံရိပ်ဟောင်းတွေကိုပဲ တွေးကြည့်ကြစေလိုပါတယ် ).
ဆွေမျိုး နဲ့မိတ်ဆွေ တချို့မကျန်းမာကြလို့ဒီတခါ ရွာအပြန်မှာ နေ့ တိုင်းလိုလို ဆေးရုံတွေ ဆေးခန်းတွေ ပဲ ရောက်ခဲ့တာ များတယ် ။
ရန်ကုန် ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး။
ကျောင်းသားဘဝက နေ့ စဉ်ဝင်ထွက် ပညာ ဆည်းပူးခဲ့ ရတဲ့နေရာ တခုထဲမှာ အရောက်ဖြစ်ဆုံး နေရာပေါ့ ။ သူကတော့ နှစ်တစ်ရာကျော်ခဲ့ပေမဲ့ကျားကုတ်ကျားခဲ အသက်ဆက်နေရဆဲပါ ။ ဆေးကုန် ဆေးမစုံ နေကြတဲ့ ဆေးရုံတွေထဲ တခုအပါအဝင်ပေမဲ့အသပြာ ခန်းနေကြတဲ့ကျောမွဲတွေ အတွက် ကောက်ရိုးတမျှင်ပေါ့ ..ဒီနေရာက အကွက်ကောင်း နေရာကောင်းဆိုတော့ သူလည်း မျက်ခုန်းတလှုပ်လှုပ်ပဲတဲ့လေ ။ ပြည်သူ့ ဆေးရုံ ဆိုတဲ့အမည်မှ “ပြည်” ဆိုတဲ့ စာလုံးတလုံး ဖြုတ်ခံရနီးနေပြီလား မသိ ။
ဒီခေတ်ကြီးမှာ ဦးနှောက်ဖေါက်စားကြသူများ နဲ့ဖေါက်စားခံရသူများ အတော်လေးပိုများ လာကြလို့ရွှေရွာကြီးက ဒီနေရာလေးဟာလည်း အတော် အရေးပါတယ် ။အဲ့ဒီက အထူးကုကြီးက အလွန်တော်တယ် ဆိုကြတယ် ။
အမျိ်ုးသားတီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာန ။ ရွှေပြည်သားများ အဖြစ်အများဆုံး ကူးစက် ရောဂါကြီးတခု ။ သေဆုံးမှုတွေလည်း ကြောက်ခမန်းလိလိပဲ ။ ခေတ်မှီဆေးဝါးတွေ ပေါ်ပေါက်နေပြီ ဖြစ်လို့ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတော်တော်များများ မှာအောင်မြင်စွာကုသ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ပြီ ဖြစ်ပေမဲ့ ...ရွှေနိုင်ငံတော်က တာဝန်ရှိသူများက အားထုတ် ကူညီသော်လည်း အားလုံးကို မစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်သေး ။ တီဘီကုဆေးတွေက ဈေးကြီးလွန်းတာကြောင့် ထုတ်ပေးထားတဲ့ဆေးများက မှောင်ခိုဈေးကွက်သို့ရောက်ပြီး ဆီ ဆန် ဆား ဟင်းစားများအဖြစ် အသွင်ပြောင်းလိုက်ကြရတဲ့ကျောမွဲများ ရောဂါပျောက်ချင်ကြပေမဲ့လောလောဆယ် ဝမ်းစာက ပိုအရေးကြီးနေကြလို့ ဆေးမသောက်ဖြစ်ကြ ..ရောဂါ ပိုပွားကြ နဲ့သံသရာ လည်နေဆဲ။
သွေးရောဂါ အထူးကုဌာန ၊ ဗဟို အထူးအရေပြားရောဂါ အထူးကု ဌာန ။
ဒီရောဂါများတွေလည်း များပါတယ် ။ လူနာတွေ များတယ် လို့ ဆိုချင်တာပါ ။ အဆောက်အဦးကိုကြည့်ပြီး အမြင်မသေးကြစေလိုပါ ။ အသက်ပေါင်းများစွာ ကယ်တင်ပေးနေတဲ့နေရာတခု ပါပဲ ။ စေတနာ မှန်မှန်နဲ့ကုသပေးနေကြတဲ့ဆရာဝန်၊ ဆရာမ ၊ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေ ရှိနေကြဆဲပါ ။ အမြင်စုတ်ပေမဲ့ရွှေထုပ်တဲ့မြပုဝါ ထဲမှာ သူလဲ ရွှေတွေ ထုပ်ပေးနေလျှက်ပါ ။ တခြားရွှေထုတ်စားကြသူများကတော့ ဒီလိုနေရာမျိုး ကြာကြာ နေနိုင်မယ် မထင်ပါ ။
ဆရာမလေးတွေ အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်နေကြတယ် ။
ဆရာဝန်မမကြီးတွေလည်း ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ထမ်းဆောင်နေကြတယ် ။
ဆရာဝန်မမက မှန်ကန်တဲ့ကုသမှု order ပေး ၊ ဆရာမ ညီမလေးက တသွေမတိမ်း လုပ်ကြပေါ့။ တဦးကောင်း တယောက်ကောင်းရုံနဲ့ လုပ်ငန်းတခု မပြီးမြောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ ။ စနစ်တကျ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင် ကြရမှာပါ ။ ငါတော်တယ် ငါတတ်တယ် ဆိုပြီး လူနာကုလို့ မရ ။ သူ့ နေရာ နဲ့ သူ တော်ကြသူတွေကြီး ပါပဲ ။
(မှတ်မိပါသေးတယ် .. ကိုယ်ဟောက်ဆာဂျင်ဘဝက သွေးသွင်းဖို့အပ်တုတ်တုတ်ကြီးနဲ့ဦးဆုံးထိုးပေးရမဲ့ လူနာ ရှေ့ မှာ လက်တွေ တုန်လို့အတွေ့ အကြုံအများကြီးရင့် တဲ့ထမိန်ပြာနဲ့ဘလူးစတပ်ဖ်ကြီး ဒေါ်သန်းမြင့် ဆီ မျက်နှာငယ်နဲ့အကူအညီတောင်းရသေးတယ် ။ ဘဝတသက်မှာ ပထမဦးဆုံး IV ထိုးတဲ့ အတွေ့ အကြုံ ကို အဲ့ဒီ ဆရာမကြီး ဆီက သင်ယူခဲ့ရပါတယ် ။ ခွဲစိတ် အဆောင် ၁၇-၁၈ မှ ဆရာမကြီးကို ခုထိ ကျေးဇူးတင်နေဆဲပါ ။ ခုတော့ သူလည်း စစ်စတာကြီးဘဝ နဲ့အငြိမ်းစားယူသွားပါပြီ ။ ကြာတောင်ကြာခဲ့ ပြီပဲလေ )
ဒါကတော့ဗဟိုသွေးလှူဘဏ်ကြီးပါ ။ ဆယ်တန်းအောင် တဲ့နှစ်ရယ် ၊ ဒုတိယနှစ်ဖြေအပြီးရယ် မှာ လုပ်အားသွားပေးခဲ့ဖူးပါတယ် ။အဲ့ ဒီ အချိန်တုံးက ပျော်စရာ တခု က သွေးလာလှူတဲ့ သူတွေကို သွေးပေါင်ချိန်ပေး၊ ကိုယ်အလေးချိန်ပေး ၊သွေးကူဖေါက်ပေး နဲ့ပြီးတော့ နေ့ ခင်းနေ့ လည် မောရင်၊ သွေးလှူ တဲ့သူတွေ နဲရင် အပေါ်ထပ် အခန်းထဲမှာ သွေးလှူရှင်တွေကို ကျွေးတဲ့ နို့ နဲ့ကြက်ဥ တခါတလေ ဘီစကစ်မုန့် တွေ သွားပြီး တောင်းစားခဲ့ ကြ တာတွေပါ ။ ကရင် ဆရာမကြီး နဲ့ ဆရာမလေးတွေကလည်း သဘောကောင်းကြတယ် ။
သင့်သွေးဖြင့် အသက်ကယ်ပါ ။
သွေးတစက် အသက်တချောင်း ။ တန်ဘိုးဖြတ်မရနိုင်တဲ့သွေးတစက်ပါ ။ ဒီတော့ ဒီသွေးတွေကို တန်ဘိုးမဖြတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတော်ကြီးမှ ပြည်သားများကို အခမဲ့ပေးဝေကုသ အသက်ဆက်ပေးနေပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့သွေးပဲ ရှိပြီး သွေးအိတ်မရှိလို့မရပါဘူး ။ ဒါကြောင့် ထူးဆန်းထွေလာ ရွှေပြည်ရွာမှာ သွေးအိတ်က သွေးထက် ပိုပြီး အဖိုးတန် နေပါပြီ ။ သွေးဘိုး ပေးရန် ( လုံးဝ ) မလိုပါ ။ သွေးအိတ်ဘိုး ပေးရန် သာလိုအပ်ပါတယ် ။ သွေးအိတ် ၂ အိတ် တသောင်းခွဲထဲ ပါတဲ့။ အဲ့ဒီထဲမှာ ဘီပိုး စီပိုး နဲ့ ဟိုပိုး တွေ ပါ၊ မပါ စစ်ပေးတဲ့စရိတ်စက ပါပြီးသားပါ ။ သွေးအိတ်ဘိုး ထက်စာရင် အသက်တချောင်း က ပိုပြီး အဖိုး တန်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် သွေးအိတ်ဘိုးကို အသက်ရှိသူ လူနာတိုင်း က ကြည်ဖြူစွာပဲ ပေးကြပါတယ် ။း(
သွေးလှူ ဘဏ်မှ သွေးကို အဆင့်ဆင့် ထုတ်ယူ ၊ သွေးအမျိုးအစား မှန် မမှန် စစ်ဆေး ၊ ဆရာဝန် နဲ့ဆရာမတို့ လက်မှတ်ထိုး ၊ စာရင်းသွင်း ပြီးရင် သွေးသွင်းဖို့ဒီလို အရင် ပြင်ဆင်ကြတယ် ။ လက်အိပ် ကို လူနာ မှ ဝယ်ပေးရတယ် ။ ကျန်တာတွေ ပလပ်စတာ ၊ အရက်ပျံနဲ့ဂွမ်းက အစပေါ့ ။း) ။ စရိတ်မျှပေး ကျန်းမာရေးလို့ဆိုပေသကိုး ။
မှတ်သားဘွယ်ရာ ဆောင်ပုဒ်များ ..။
ဒါက ကျန်းမာရေးဌာနကြီးရဲ့ ရည်မှန်းချက် နဲ့ အကောင်အထည် ဖေါ်ဆောင်နည်းများ ။ အလွန် ကောင်းပါ၏ ။ ဖြစ်တာ မဖြစ်တာတော့ ကိုယ့်ထိုက်နဲ့ကိုယ့်ကံပေါ့ လေ ။ ရည်မှန်းချက် ကြီးကြီး ကို အကောင်အထည် ဖေါ်နေတာ ဘယ်လောက် အချိန်တွေ ကြာနေပြီလဲ ။ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတောင် အရောင်မှိန် ကွဲပြဲ နေပြီပဲ လေ ။အောင်မြင်ဖို့ တော့ မနေ့ ကထက်စာရင် တရက် ပိုနီးလာပြီ လို့သဘောထား မိပါတယ် ။ တနေ့ နေ့ တော့ ဖြစ်လာရမည်မှာ မလွဲပါ ။
သူ့ သဘောထား နဲ့တို့ တာဝန် ။
ဒီ သင်တန်းကျောင်း နေရာ လေးက အရင်တုံးက ဆရာမတွေ အဆောင် ။ ပြီးကာစကတော့ အတော်လေးသစ်လွင်ပါတယ် ။ ဖရက်ရှာ နပ့်စ် လေးတွေ နေကြတယ်။ သူနဲ့ဘေးချင်းကပ်ရက် မှာ အဆောင်ဟောင်းတခု ။ နဲနဲ ပိုကြီး (ရင့်) တဲ့နပ်စ့် တွေ နေကြတယ် ။ ဒီတော့ ဒီအဆောင်တွေကို နာမည် အလှလေးတွေ ပေးထားကြတာ ပုလဲကျွန်း နဲ့ဟိုင်းကြီးကျွန်း .. တဲ့။ စည်းကမ်းကတော့ အတော်လေးကြီးခဲ့ ကြပါတယ် ။ အဆောင်မှူးအဖြစ်နဲ့ဟိုင်းကြီးကျွန်းသူ တွေက အုပ်ချုပ်တယ်ပေါ့ ။ ညနေ ဧည့်သည်ချိန်ဆို စည်ကားပါတယ် ။ည အချိန်တော့ ဒီဝင်းဘေးမှ သိပ်ဖြတ်မလျှောက်ရဲကြဘူး။ ( ည ည ဆို ဆေးရုံ အလုပ်သမား အိနြ္ဒိယလူမျိုး တွေ က အရက်မူးမူးနဲ့လူသေတင်ထားတဲ့ ထော်လီလေး တဂျိန်းဂျိန်းတွန်းပြီး သီချင်း တကြော်ကြော် ဆိုပြီး အလောင်းပို့ လေ့ရှိကြတယ် ) ။ နာမည်ကျော် မော်ကျူရီ ကြီး ရှိတယ်လေ ။သူရဲခြောက်တယ် တဲ့။ နာမည်ကြီး အသုဘရှိတဲ့နေ့ တွေ ဆို ကားတွေ တန်းစီလို့။ လူတွေ ကြပ်လို့ပေါ့ ။ အဲဒီ နေရာ ခုတော့ သင်တန်းကျောင်း ဖြစ်နေပြီ ။
စည်းကမ်းချက်များ ၊ မေတ္တာရပ်ခံချက် ။
စည်းကမ်းသည် လူ၏တန်ဘိုး ။ စည်းကမ်းလိုက်နာ ဘေးကင်းကွာ တဲ့။
ဒီတော့ လူနာများ ၊ ဧည့်သည်များ ၊ ဆေးကိုယ်စားလှယ်များ အားလုံး စည်းကမ်းရှိကြရပါမယ် ။
ဒါကတော့ ပြည်သူ့ ဆေးရုံ မဟုတ် တဲ့သူ့ ဆေးရုံတွေ ထဲမှ တခုပါ ။ (ကွာခြားပုံများ ကတော့ ဈေးပိုကြီး၏ ဆိုတာ ပြောဖို့လိုမယ် မထင်ပါ )
နား ..နား ပြီး ပြောပါမယ် ၊ ဒီနေ့ တော့ ဒီလောက်ပဲ ။( ပုံတွေ ထဲမှ စာလုံးများ သေချာစွာ မြင်လိုက ပုံကို ကလစ်လုပ်ကြည့်ပါလို့ပြောနေစရာတောင် မလိုဘူး ထင်ပါတယ် ... အားလုံး သိပြီးသားတွေ ပဲလေ ..း))
:kiki : at 1/25/2010 07:00:00 PM
ဒီနေ့ တနင်္ဂနွေအားလပ်ရက်မနက် ချမ်းချမ်းစီးစီးမှာမိုးတွေကလည်းရွာနေတော့ အပြင်ထွက် လမ်းလျှောက်ဖို့ တောင်တက်ဖို့အစီအစဉ်လည်း မဖြစ်နိုင်တော့ အိမ်မှာပဲ ကွေးရင်း တွေးရင်း ဟိုဝင်ဒီထွက် စပ်စုရင်း ၊ သီချင်း ဗီဒီယိုလေးတွေ မွှေနောက်ရင်းနဲ့ Youtube ထဲမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ဝက်လောက်က ခေတ်စားခဲ့တဲ့ Wonder Girls အဖွဲ့ ရဲ့ Nobody ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို ပြန်ဖွင့် ကြည့်ဖြစ်တယ် ။ ကြည့်ဖူးပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါ ။ ဒီအထဲကမှ ကလေးငယ် ဝတုတ်လေး တယောက်ရဲ့ပြောင်မြောက်လှတဲ့ အက လေးကို သဘောကျမိလို့့ မျှဝေလိုက်ပါတယ် ။ ရယ်စရာ ၊ အမောပြေစရာ ဒီ သီချင်းလေးကို ခံစားကြည့်ကြပါဦး ။
ဒီအောက်က MTV ကတော့ အော်ရီဂျင်တယ်.. Wonder Girlsရဲ့Nobody MTV ပေါ့နော် .. ခုဆိုရင် ကိုရီးယားခေတ်ရောက်နေပြီလို့ တောင် ပြောရတော့မလိုပါပဲ ၊ ရွှေပြည်ကြီးမှာ လည်း တီဗီအစီအစဉ်တွေ လွှင့်တာ ၊ ဖွင့်လိုက်တာ နဲ့ ကိုရီးယား ၊ တရုပ် ပြေးမလွတ် ပါ။ ရွှေပြည်သားတွေ အင်္ဂလိပ်စကားပြော တတ်ကုန်မစိုးလို့ နားရည်ဝကုန် မစိုးလို့နဲ့ တူပါရဲ့။ အင်္ဂလိပ်ကား ဆိုတာ ဘယ်လိုပါလိမ့် လို့ တောင် တွေးယူရလောက်အောင်ကို ရှားပါးနေပြီလေ ။ ဒီတော့လည်း ရှဲ့ ရှဲ့၊ နီဟောင် ။အိုပါး ။ ဆိုတာ တွေ နဲ့ပဲ နားယဉ်နေကြရပြီပေါ့ ။
ကဲ.. ပြောနေကြာတယ် ရွာသားရေ ။ ခေတ်နဲ့ အမှီ ကိုရီးယား MV လေးပဲ ကြည့်ကြတာပေါ့ ။း))
:kiki : at 1/24/2010 09:18:00 AM
ခုတလော အကြောင်း ကြောင်းတွေကြောင့် စာရေးဖို့ စိတ် သိပ်မရှိတဲ့အတွက် ပို့ စ်အသစ်လည်း မတင်နိုင်ပါ ။ အစတည်းက ယဉ်သကို လို့ဆိုရမဲ့ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရဲ့နှစ်ဦးပိုင်းမှာ စိတ်မရွှင်စရာတွေနဲ့ နှုတ်မဆက်ချင်တာမို့ရွာအပြန် အလွမ်းပုံရိပ် ကလေးများကို ပဲ အမှတ်တရ ရေးလိုက်မိပါတယ် ။ ရွာမှာ နေခဲ့ရတဲ့တပါတ်ဆိုတဲ့ အချိန်တိုတိုလေးမှာ အပျော်ခရီး သက်သက် မဟုတ်ခဲ့တာကြောင့်ပျော်စရာ အကြောင်းများနဲ့ သိပ်မသက်ဆိုင်လှတဲ့ အကြောင်းအရာတွေသာ ပိုများနေပါလိမ့်မယ် ။ နားလည်ပေးကြ စေလိုပါတယ် ။
အမိမြေကြီးပေါ်ရောက်ရောက်ချင်း ခရီးဦးကြိုပြုနေကြတဲ့ လေယာဉ်ပျံကြီးများ တန်းစီ စောင့်ဆိုင်းနေကြလေရဲ့။ဆရာ မြစ်ကျိုးအင်း ရဲ့ဘလော့ဂါ အငြိမ့်ထဲက တေးသွားလေး ပြန်ငြီးမိလိုက်တယ် ။ ဒါတို့ ပြေ ဒါတို့ မြေ တို့ မပိုင်တဲ့ လေ..(ပျံ ) ။ ဒီလေယာဉ်ကြီးတွေ ဘယ်သူပိုင်သလည်း ဆိုတာ ၊ အားလုံးသိကြမယ် ။ ဒါကြောင့် ထင်ပါရဲ့၂၀၁၀ လွတ်လပ်ရေးနေ့ မှာ တိုင်းပြည်ဂုဏ်ဆောင် သီရိပျံချီဘွဲ့ ကြီး ချီးမြှင့်ခြင်းခံ ခဲ့ရသူ တယောက်ဖြစ်လာတယ် ။(မမသီရိ သတိထားနေပါ .. ပြန်လာရင် အချီခံနေရမှာစိုးပါတယ် ) ။ဒီ စွမ်းဆောင်မှု ဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဘွဲ့ ကြီးအကြောင်း သိချင်ရင် ဒီမှာ ဆက်ကြည့် လို့ ရပါတယ်
တခုသော အာရုံတက်မှာ ဒီလို ဆွမ်းလောင်းကြသူများ နှင့်အတူ လှူခဲ့ရတဲ့ ကုသိုလ်လေးအတွက် ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်မိခဲ့ရတယ် ။ မမြင်ရတာ အတော်ကြာလှပြီဖြစ်တဲ့ ဒီမြင်ကွင်းလေးမှာ ရင်ထဲ စွဲစေမိပါတယ် ။အေးချမ်းသာယာလှတဲ့ဒီဇင်ဘာနံနက်ခင်းတခုပဲပေါ့ ။
ဒီဇင်ဘာနံနက်ခင်း နေမထွက်မီ ကန်ဘောင်ပေါ်မှာ ကျန်းမာရေးအတွက် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစားသူများ ရှိကြတယ် ။ ဟို ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာတော့ ဆရာ ဘဲဥ တယောက် မလှုပ်ရှားနိုင် ငုတ်တုတ်ထိုင်လို့ ပေါ့။စောစောစီးစီးဆိုတော့ ခမျာမှာ လဖက်ရည် မသောက်ရရှာသေး တဲ့ အတွက် ထိုင်မှိုင်နေတာတော့ ဟုတ်ဟန် မတူပါ ။ ရွှေပြည်ရွာ အမှတ်တံဆိပ် ကြွတ်ကြွတ် အိတ်များ ကလည်း နေရာအနှံ့ပျံ့ ကျဲ လို့ ရယ် ။ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှု က သူတို့ နဲ့ လားလားမျှမဆိုင် သလိုများ သဘောထားနေကြတာလား ရွှေရွာသားများရယ် ။
ဆောင်းတွင်းရဲ့နေလုံးပူပူကြီး မထွက်မှီ မြင်ရတဲ့ အင်းယားအလှ ။ ဟိုးအဝေးမှာ မှုံပျပျ နဲ့ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီး ကို လှမ်းမျှော် ပူဇော်ခဲ့ရတာ လည်း ကြည်နူးစရာ ပါပဲ ။ ချွေးထွက်များမှ သွေးထွက်နည်းအောင် လျှောက်ရ ပြေးရ ဝိတ်လည်းမကျ နဲ့၊ စိတ်ဓါတ်သာ ကျ သွားခဲ့တယ် ။ အားကစားလုပ်တယ် ဆိုရာဝယ် နဲနဲ လှုပ်ပြီး များများတုတ်တော့ ဝိတ်မကျတာ မလွန်ပါဘူး ထင်ပါတယ် ။
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးကိုလည်း မနက်စောစော ဖူးခဲ့ ရတယ် ။ အဝေးက မှုံပျပျ ရခြင်း အကြောင်းရင်းက စေတီတော်ကြီးရဲ့ခြေရင်း အောက်အရစ်မှာ ငြမ်းတွေဆင်ပြီး ရွှေသားအတိပြီးတဲ့ရွှေပြားအချပ်များကို ပြန်လည် ပြုပြင်ရေး လုပ်နေတာကြောင့် ဖြစ်ပါမယ် ၊( ဘုရားပြီး ငြမ်းဖျက်ဆိုတော့ ငြမ်းမဖျက်တာကြာတဲ့ အကြောင်းကို တွေးယူနိုင်ပါတယ် )
ကမ္ဘာတလွှားမှာ မြန်မာပြည်မှာသာ တွေ့ မြင်ရမဲ့ကြည်နူးဘွယ်ရာ မြင်ကွင်းလေး တခုပါ ။ စေတီတော်ကြီးသန့် ရှင်းရေးအတွက် အသင်းအဖွဲ့ အလိုက် တံမျက်လှည်းပြီး ကုသိုလ်ယူ နေကြသူများ အား လေးစားမိပါတယ် ။ သာဓုခေါ်မိပါတယ် ။ရွှေတွေ ငွေတွေ ပုံအောပြီးလှူမှ ကုသိုလ်ရတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ စိတ်အားထက်သန် လုပ်အားအမှန်နဲ့ဖြူဖြူစင်စင် လုပ်အားအလှူ ကလည်း စိတ်ထားတတ်ရင် မြတ်ပါတယ် ။ ဒီလို တက်ညီလက်ညီနဲ့လှည်းကျင်း လိုက် ကြတော့ အမှိုက်တွေ တခဏအတွင်းရှင်းလင်းနိုင်ပါလားလို့တွေးမိလိုက်တယ် ။ အင်းလေ .. အမှိုက်တွေ ..အမှိုက်တွေ က ရှင်းတဲ့ သူတွေထက်များနေကြတော့လည်း ...ခက်တာပါပဲ ။
ကြံ့နဲ့ ဖွတ် တွေ လည်း ၊ ဒီင်္လို မျိုး လုပ်ပေးကြရင် ရွာသားများ ကျေးဇူးတင်ကြမစိုးလို့မလုပ်ကြတာ ဖြစ်ပါမယ် ။ဒါပေမဲ့ ခုဆို ၂၀၁၀ အတွက် ၊ တစ်လကို ငွေ ကျပ်တစ်ရာ နှုန်းနဲ့ ပဲ ပြန်ဆပ်ရမဲ့သိန်း ၇၀ တန် ၊ တန်ဘိုးနည်းအိမ်ယာ စီမံကိန်း နဲ့ ရွှေရွာသားတွေ နေဖို့ခါတော်မှီ အိမ်ယာတွေ ဆောက်ပေးနေကြတယ် လို့ လည်းသိရတယ် ။ ခုချက်ချင်း အလုံးအရင်းလိုက် ပေးချေစရာ မလိုပဲ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ .. နှစ်ပေါင်း ၆၀၀မျှ ကြာ တဲ့အထိ ဖြေးဖြေးချင်း ပြန်ဆပ်ရမှာ ဆိုတော့ ရွာသားတွေ ပျော်ကြမယ် ထင်ပါရဲ့ ။း) ။ ဖွားကိ ဂဏန်းသချာင်္မှာ အလွန်ညံ့ ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ကူညီပြီးတွက်ပေးကြပါအုံး ။ ဘယ်နှစ် နှစ်ကြာမှ အရစ်ကျ ဆပ်တဲ့ အကြွေးကျေနိုင် မလည်း ဆိုတာ ပါ ။ လူတယောက်ရဲ့သက်တမ်းဟာ ဘယ်လောက်ကြာကြာရှိမှာမို့ လည်း လို့ တောင် မစဉ်းစားရဲလောက်အောင်ပါပဲ ။ ဘိုးသက်ရှည် ဘွားသက်ရှည် တို့ နေကြတဲ့ရွှေတိုင်းပြည်မို့၆၅ နှစ်တို့ ၊ ၁၀၄ နှစ်တို့ချ ကြတာလည်း မထူးခြားတော့ဘူးလို့တွေးယူလိုက်ပါတယ် ။
ဪ .. ဘုရားဖူးရင်းနဲ့ လည်း ဒီအတွေးဂယက်က ရိုက်ခတ်နေရသေးတယ် ။ မောဟ တွေ မောဟတွေ ပဲလို့ အတွေးစကို အမြန်ဖြတ် လိုက်ရပါတယ် ။ နောက်မှပဲ ....
:kiki : at 1/21/2010 09:15:00 PM
လူ့ ဘောင်လောက အသင်းအဖွဲ့ တွေ မပြောနဲ့ ၊ သတ္တဝါတွေ မှာတောင်မှ အအုံအဖွဲ့နဲ့ နေကြသူတွေမှာ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ ရှိရတယ် ။ နောက်လိုက်တွေကလည်း စည်းကမ်းတကျ နဲ့ စည်းလုံးကြရင် အလုပ်တခု ဟာ လျှင်မြန်စွာ အောင်မြင်မယ်၊ ပြီးဆုံးမယ် ။ ပျားအဖွဲ့ပျားအုံ မှာ ပျားဘုရင်မကြီး ရှိပြီး ပျားလုပ်သားတွေ အားကြိုးမာန်တက် အလုပ်လုပ်ကြတယ်၊ တပင်မှ တပင် လူးလာဆန်ခတ် ကူးခပ်ပျံသန်းရင်း ဝတ်ရည် စုဆောင်းကြတယ် ။ပျားအုံ ထဲမှာ သိုမှီးထားကြတယ် ။ ပုရွက်ဆိတ် အဖွဲ့ လည်း အတူတူပါပဲ ၊ပုရွက်ဆိတ် အကြီးအကဲ နဲ့ရှေ့ ပြေးအဖွဲ့ တွေ ၊ ဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့ တွေ နဲ့အစာရှိရာ ကို ရှာတွေ့ တယ် ။ သူတို့ ခန္ဓာကိုယ်ထက် အဆပေါင်း များစွာ ကြီးမား လှတဲ့အစာတွေကို ခရီးဝေးဆီ သယ်ဆောင်ယူနိုင်တယ် ။ အစာ ဖူလုံအောင် သိုလှောင်ထားနိုင်ကြတယ် ။ ဒီလိုဆိုတော့ သူ တို့ ထက် ညာဏ်ရည် ထွန်းကားတဲ့လူတွေ မှာ ၊ ဒီထက် ပိုတိုးတက်ကောင်းမွန်တဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတခု ၊နိုင်ငံ တခု ဖြစ်ဖို့အရည်အချင်းရှိတဲ့ ၊ စေတနာ မှန်ကန်တဲ့၊ ရဲရင့်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းနဲ့စည်းကမ်းရှိတဲ့၊ ညီညာတဲ့၊ သတ္တိရှိတဲ့ နောက်လိုက် တွေ ရှိဖို့ပိုပြီး လိုတယ် ဆိုရင် မှားမယ် မထင်ပါ ။
လင်းယုန်ဌက်ဟာ သူ့ရဲ့မျိုးရင်းထဲက စွန်ဌက်၊ သိမ်းဌက်စတဲ့ ဌက်မျိုးတွေထဲမှာ အသက်အရှည်ဆုံး နေထိုင် ရှင်သန်နိုင်တဲ့ သတ္တ၀ါ ဖြစ်ပြီး အနှစ် ၇၀ အထိ အသက်ရှည် နေနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ သည်လို အသက်ရှည်ရှည်နေနိုင်ဖို့ လင်းယုန်ဌက်ဟာ အလွန်ခက်ခဲတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်ကို မဖြစ်မနေ ချမှတ်ရပါတယ်။
သူ့အသက်အနှစ် ၄၀ ကို ရောက်တဲ့အခါ သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်အလိုက် ရှည်လျှားပျော့ပျောင်းလာတဲ့ ခြေသည်း ကောက်ကောက်တွေဟာ သူ့ရဲ့အစာဖြစ်တဲ့ သားကောင်တွေကို မဖမ်းနိုင်တော့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့တချိန်က ရှည်လျား ချွန်ထက်ခဲ့တဲ့ နှုတ်သီးတွေဟာလည်း ခုတော့ သားကောင်ကို မစားနိုင်လောက်အောင် ကွေးညွတ်လာခဲ့တယ်။
သူ့ရဲ့ အိုမင်းလာတဲ့ အသက်အရွယ်အလိုက် တောင်ပံတစ်စုံပေါ်က ဌက်မွေးတွေဟာလည်း ပိုမိုထူထပ်လာတဲ့အတွက် လေးလံလာပြီး တောင်ပံအစုံကို မဖြန့်ကားနိုင်တော့ဘဲ ရင်အုပ်မှာကပ်နေရတယ် ။
ဒါကြောင့်အရင်လို ပျံသန်းနိုင်ဖို့တော်တော်ကိုခက်ခဲလာနေပါပြီ။ဒီအချိန်မှာ သူ့အတွက် ရွေးချယ်စရာ နှစ်လမ်းသာ ရှိပါတော့တယ်။ ပထမ တစ်လမ်းက အသေခံမလား ၊။ ဒါမှမဟုတ် ရက်ပေါင်း ၁၅၀ ကြာမဲ့ နာကျင်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေမဲ့ ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်ထဲကို ၀င်ရောက်ဖြတ်သန်းမလား ဆိုတာပါပဲ။
သည်ပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်စဉ်မှာ လင်းယုန်ဟာ တောင်ထိပ်ကိုရောက်အောင်ပျံသန်းပြီး တောင်ထိပ်က သူရဲ့အသိုက်ထဲမှာ နေထိုင် နေဖို့လိုပါတယ်။ ပြီးတော့ သူနှုတ်သီး ပြုတ်ထွက်သွားတဲ့အထိ ကျောက်တုံးကို နှုတ်သီးနဲ့ခေါက်နေဖို့ လိုပါတယ်။ နှုတ်သီးအဟောင်း ပြုတ်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက် နှုတ်သီး သစ် ပြန်ပေါက်တဲ့အထိ လင်းယုန်ဟာ သူ့ရဲ့အသိုက်ထဲမှာ နေရပါတယ်။
နှုတ်သီးအသစ် ပေါက်လာတဲ့အခါမှာ လင်းယုန်ဟာ သူ့ရဲ့ခြေသည်းဟောင်း တွေကို သူ့နှုတ်သီးသစ်နဲ့ဖြုတ်ထုတ် ရပါတယ်။ ခြေသည်းသစ်တွေ ပြန်ပေါက်လာ တဲ့အခါမှာ သူ့တောင်ပံတစ်စုံပေါ်က ငှက်မွေးတွေကို သူ့နှုတ်သီး သစ် နဲ့ ဆွဲနှုတ် ပစ်ရပါတယ်။
သည်လိုနဲ့ငါးလကြာတဲ့အခါမှာ လင်းယုန်ဟာ သူရဲ့ကျော်ကြားလှတဲ့ ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း ပြီးနောက် ပျံသန်းခြင်း ကိုစတင်ပါတော့တယ်။ဒီလိုမှသာ နောက်ထပ် နှစ်၃၀ ဆက်၍ အသက်ရှည်နိုင် မှာဖြစ်တယ်။
အသက်ရှင် ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက် ရုန်းကန်ကြရတဲ့နေရာမှာ လူသားတွေဟာ သည်လို ပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်စဉ်တွေကို အကြိမ် များစွာ တွေ့ ကြုံ ဖြတ်သန်းကြရပါတယ်။ တခါတရံ..လိုအပ်လာတဲ့အခါမှာ အကျင့် အဟောင်းတွေ နဲ့ထုံးတမ်းစဉ်လာ အဟောင်းတွေကို ပြောင်းလဲ ဖယ်ရှားပစ်ဖို့လိုပါတယ် ။ဟောင်းနွမ်းပြီး အကျိုးမရှိတဲ့ အတိတ်ရဲ့ ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုးတွေကို ဖယ်ရှား လွတ်မြောက် နိုင်မှသာ ပစ္စုပ္ပန်ရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အသီးအပွင့်တွေကို ခံစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ အရေးကြီးတဲ့ အချိန် ရောက်လာတဲ့ အခါ ဘာမှ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်း မပြုပဲ ဒီအတိုင်း အသေခံ မလား ?၊
အသက်ရှင် ရပ်တည်နိုင်မှု အတွက်ခဏတာ နာကျင်မှု အချိန်ပိုင်းကို သည်းခံ ကျော်ဖြတ်ကြမလား? ။
သင်တို့ တတွေရော လင်းယုန် ငှက်တစ်ကောင်လို ရဲရင့်နိုင်ကြ မလား ?
လင်းယုန်ငှက်ရဲ့အသက်ရှင်သန်မှု ဘဝ အကြောင်း ကို ဒီနေရာမှ ရယူပါတယ် ။
နာကျင်မှုတွေ ပြည့်နှက် နေခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း လေးဆယ်ကျော်ကို တောင် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရပြီးပြီပဲ ။ နောက်မျိုးဆက်သစ်တွေ အတွက် နောင် လာမဲ့ နှစ်ပေါင်း လေးဆယ် တွေ ဘယ်နှစ်ပြန်လောက် နာကျင် နေရအုံးမှာလည်း ။ ဒီအတွက် ခု အချိန်မှာ မှန်ကန်တဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ၊ ထူးချွန်တဲ့ ခေါင်းဆောင် ကောင်းရဲ့ဦးဆောင်မှု နဲ့ကိုယ်တို့ တတွေဟာ ဒီလို ရက် ၁၅၀ ကြာ နာကျင်မှု အသေးအဖွဲလေးတွေ ကို ဘာကြောင့် မပေးဆပ် နိုင်ရမှာလည်း ။ ရဲရင့် နိုင်ကြရမယ် မဟုတ်လား ။
ကိုယ့်ဘဝ အတွက် ၊ ကိုယ့် မျိုးဆက်သစ်များ အတွက် မှန်ကန်တဲ့ အမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ် ပြီး သင့်တော်ကောင်းမွန်တဲ့ ခေါင်းဆောင် တဦး ရဲ့ဦးဆောင်မှု အောက်မှာ စည်းလုံး ညီညွတ် နိုင်ကြပါစေ ။အမိမြန်မာပြည်ကြီး တိုးတက်သာယာ ပါစေ ။ တိုးတက်ဝေဖြာလာတဲ့ အသီးအပွင့်များကို ပြည်သူအများ ခံစား နိုင်ကြပါစေ လို့ဆန္ဒပြုပါတယ် ။
ဝန်ခံချက်။ ။ forward mail တခုထဲမှ လင်းယုန်ငှက်ရဲ့ ဘဝအကြောင်း ကို မှီငြမ်းဖြည့်စွက်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
:kiki : at 1/17/2010 04:01:00 PM
အဆိပ် ဆိုတာ ကောင်းကျိုးမပေး အန္တရာယ် များလို့ဝေးဝေးက ရှောင်သင့်တယ် ။ အဆင် မသင့်ရင် အသက်ပါသေစေတတ်လို့ဘယ် အဆိပ် မှ မကောင်းတာ လူတိုင်း အသိပါ ။ အစားအစာ တောင်မှ အဆင်မသင့်ရင် အစာအဆိပ်သင့်တတ်တယ် ။ ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက် လို့ကိုယ်ဝန်သည်တွေ အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ် ။ အဆိပ်အတောက် စာပေတွေကြောင့်လည်းလူတွေရဲ့အတွေးအခေါ်၊ စာရိတ္တ တွေ ပျက်စီး နိုင်တယ် ။ ဒါကြောင့် ဘယ် အဆိပ်မှ မသင့်တာ အကောင်းဆုံး ပေါ့ ။ ဒီတော့ ဘယ်လို အရာတွေမှာ ( သတ္တဝါတွေမှာ ) အဆိပ်ပြင်းပြင်းရှိတတ်သလည်း လို့သိနိုင်အောင် စပ်စုကြည့် လိုက်တယ် ။ ထုံးစံ အတိုင်း ဟိုမွှေသည်မွှေ ပေါ့ ။
ဒါက အာရှ နဲ့ သြစတြေးလျ တိုက် မှာ တွေ့ ရှိရတဲ့ ဂျယ်လီ ငါး Box Jelly fish ပါ ။ ( Jelly box ) လို့ လည်း ခေါ်ကြတယ် ။
အဆိပ် အပြင်းဆုံးမြွေတမျိုးက တော့ အရှေ့ တောင် နဲ့ တောင်အာရှ တောနက် ပိုင်းတွေမှာ ရှိကြတဲ့ King Cobra ပေါ့၊ (Ophiophagus hannah) လို့ လည်းခေါ်ကြတယ် ။ အရှည် က ၁၈ ပေ ခွဲ လောက်ထိရှိပြီး မြွေဘုရင် လို့ဆိုနိုင်တယ် ။ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ သူဟာ တခြား မြွေ တွေကိုတောင် စားပစ်တတ်ကြတယ် ။ ဇာတ်တူသား စားတာ ဆိုတော့ ရှောင်နိုင်မှ လွတ်မယ် ။ လူ ကို မပြောနဲ့ အာရှ ဆင်ကြီးတကောင် ကို တချက်တည်း ကိုက်လိုက်ရင်တောင် အဲ့ ဒီဆင် မှာ အလွန်ဆုံး ၃ နာရီပဲခံနိုင်တယ် ။ အကြောင်းရင်းကတော့ သူ့ အဆိပ် ပိုပြင်းထန်လို့ မဟုတ် ပါဘူး ။ သူ့ တချက် ကိုက်လိုက်ရင် ထွက်လာတဲ့ မြွေဆိပ် ပမာဏဟာ တခြား မြွေတွေထက် ၅ ဆ လောက် ပိုများ နေ လို့ ပါတဲ့ ။ဒါကြောင့် တချက်တည်း ကိုက်ခံလိုက်ရတာ နဲ့ဆင်ကြီးတောင် ဘိုင်းကနဲ ပဲ ။
အမြင်အရတော့ ချစ်စဖွယ် ၊ လှလှပပ မာဘယ်ကျောက်တုံးလေး နဲ့ တူတဲ့ ခရုလေး ပါ ။ သူ့ အဆိပ်တစက် ဟာ လူ အယောက် ၂၀ ကျော်ကို သေစေနိုင်ပါသတဲ့။အနွေးပိုင်း ပင်လယ်ရေ ထဲမှာ ကျောက်တုံးလှလှလေးတွေ့ လို့ ကောက်ယူဖို့ စိတ်မကူးလိုက်နဲ့ နော် ။ ထိလိုက်တာနဲ့ ကွိသွားမှာ ၊ ဘယ်လို ဖြစ်နိုင်သလည်း ဆိုတာ ကတော့ ထိတဲ့ နေရာ မှာ အလွန် နာကျင်စေပြီးဖူးယောင်လာမယ် ၊ပြီးတော့ ထုံကျင် လာမယ်၊ ပြင်းထန်ရင်တော့ ကြွက်သားများ တုန့်ဆိုင်းပြီး အမြင်ဝေဝါး ကာ အသက်ရှူ ရပ်တဲ့ အထိဖြစ်စေတယ် ။ အဆိပ်ဖြေဆေးတောင် မရှိသေးဘူးတဲ့ ။ မှတ်တမ်းများ အရတော့ ခုချိန်ထိ လူပေါင်း ၃၀ မျှ အသက်ဆုံးရှူံးခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသတဲ့ ။
လှတပတ အော်တိုပတ်စ် ကလေးပါ ။ ပုံသဏ္ဍန် နဲ့ လိုက်အောင် အမည်ပေးထားတာက Blue-Ringed Octopus တဲ့ ။ ဂေါက်သီးလုံးအရွယ်လောက်သာရှိပေမဲ့ အဆိပ်အလွန်ပြင်းပါသတဲ့ ။ လူ ၂၆ ယောက် မျှကို တခဏ အတွင်းသေစေနိုင်တဲ့ အဆိပ်ပမာဏ ရှိတယ် ။ အဆိပ်ဖြေဆေးလည်း မရှိသေးပါ ဆိုပဲ ။ သူ အကိုက်ခံရတဲ့ နေရာ မှာတော့ နာကျင် ခြင်းမရှိပေမဲ့ ကြွက်သားတုန့်ဆိုင်း အသက်ရှူရပ်ပြီး နောက်ဆုံးတော့ သေစေနိုင်ပါသတဲ့ ။ဂျပန်၊ သြစတြေးလျ အနီး ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာ ထဲမှာ တွေ့ ရှိနိုင်ပါသတဲ့ ။
ဒါကတော့ Death stalker scorpion ပါ ။ အကိုက်ခံ ရတဲ့ နေရာ မှာ လွန်စွာ နာကျင်စေတယ် ၊သူ့ အဆိပ်က ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ လူကြီးတယောက် ကို မသေနိုင်စေပေမဲ့ နှလုံးရောဂါ ရှိသူများ၊ ကလေးငယ်များ နဲ့ အသက်အရွယ် အိုမင်းသူများ ကိုတော့ အသက် အန္တရာယ် ပေးနိုင်ပါတယ် ။မြောက်အာဖရိကတိုက်နဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဒေသတွေမှာ တွေ့ ရှိနိုင်ပါတယ် ။
အရုပ်ဆိုးလှတဲ့ ဒီ ကျောက်ငါး (Stonefish ) က အလှမယ်ဘွဲ့ မရနိုင်ပေမဲ့ ကမ္ဘာ့ အဆိပ်အပြင်းဆုံးငါး ဆိုတဲ့ ဘွဲ့ ကိုရရှိထားပါတယ် ။ သူ့ ရဲ့ ချွန်ထက်တဲ့ ဆူးတောင်တွေထဲမှာ ပြင်းထန်တဲ့ အဆိပ်တွေကို သိုလှောင်ထားတယ် ။ အကိုက်ခံရတဲ့ နေရာ မှာ အလွန် နာကျင်စေပြီး ၊ အဲ့ဒီနားတဝိုက်က တစ်ရှူးအသားစတွေကို ပျက်စီးစေတဲ့ အတွက် အကိုက်ခံရတဲ့ ခြေ၊ လက်တွေ ကို ဖြတ်ပြစ်ရလောက်တဲ့ အထိ ဆိုးဝါးစေတယ် ။ နာရီပိုင်း အတွင်း ဆေးကုသမှု မခံယူနိုင်ခဲ့ရင် အသက်ဆုံးရှုံးစေနူိုင်ပါတယ် ။ သူ့ ကို Capricorn ပင်လယ်ရေတိမ်ပိုင်း၊ပင်လယ်နီ မှ ကွင်းစလန်းဒေသ တလျှောက်၊ ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာ ၊ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာ တွေ မှာ တွေ့ နိုင် ပါတယ်။
ဘရာဇီးမှ ထူးဆန်းဘွယ်ပင့်ကူ (Phoneutria) သို့ မဟုတ် ငှက်ပျောသီးပင့်ကူ ( banana spider) ရဲ့အဆိပ် ပြင်းထန်မှု ဟာ ၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ် မှာ ကမ္ဘာကျော် ဂျီးနက်စ် မှတ်တမ်းတင် ဝင် ခဲ့ ပါတယ် ။ လူအများဆုံးသေစေတဲ့ အဆိပ်ပြင်းသော ပင့်ကူ ပေါ့ ။ သူ့ ရဲ့ဝ.၀၀၆ မီလီဂရမ်မျှသာ ရှိတဲ့ အဆိပ်ဟာ ကြွက်တကောင် ကိုသေစေနိုင်တယ် ။ နေ့ အချိန်မှာ ပုန်းအောင်း နေထိုင်တတ်တဲ့ သူ့ ရဲ့ အကျင့်စရိုက်ကြောင့် အလွယ်တကူ ရှာဖွေလို့ မတွေ့ နိုင်ဘူး ။ အိမ်ကြိုကြားမှာ ၊ အဝတ်ဘီဒိုထဲမှာ၊ ဘွတ်ဖိနပ်တွေထဲမှာ၊ ကားထဲမှာ ပုန်းခိုနေတတ်လို့ သတိထားသင့်တယ် ။ သူ့ အဆိပ်ဟာ အာရုံကြောတွေကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေတယ် ။ နာကျင်စေရုံမျှ မကသေးဘူး ၊အမျိ်ုးသားတွေရဲ့ ညီပုလေးကို အာရုံခံ ပျက်ပြားစေတတ်သတဲ့ ။ သတိထား နေကြရန် အသိပေးလိုက်ပါတယ် ။မပြောမရှိကြ နဲ့ နော် ။ဒါကြောင့်များ banana spider လို့အမည်တွင်တာ ထင်ပါရဲ့ ။ အပိုပြောတယ် ထင်မှာစိုး လို့အော်ရီဂျင်နယ် စာသားလေးပါ ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
အသင်ဟာ တကယ်လို့ များ တောင် အမေရိက နဲ့ အလယ်ပိုင်း အမေရိကမှာရှိတဲ့ မိုးတွင်း သစ်တော တွေ ကိုရောက်ခိုက် ပြေးလွှားဆော့ကစားရင်း အရောင်အသွေးစုံတဲ့ လှလှပပ ဖါးကလေးများကိုတွေ့ လိုက်ရရင် ဖမ်းယူဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ အဲဒီဖါးလေးဟာ အဆိပ်ပြင်းတဲ့ Dart Frog ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ် ။ သူ့ ရဲ့အရေပြားပေါ်မှာ ဒီအဆိပ်တွေကို သိုလှောင်ထားပြီး ၊သူ့ ကို ထိမိ ကိုင်မိ စားမိတာသူတွေကို အဆိပ် သင့်စေတယ် ။ ၂ လက်မ မျှ သာ ရှိတဲ့ ရွှေရောင်ဖါးလေးရဲ့ အဆိပ်ဟာ လူကြီး ၁၀ ယောက် ၊သို့ မဟုတ် ကြွက်ငယ် အကောင်ပေါင်း ၂သောင်း ခန့်ကို သေစေ နိုင်ပါသတဲ့ ။ ၂ မိုက်ခရို ဂရမ် အလေးချိန်( ပင်အပ်ခေါင်း မျှ အရွယ် ) ရှိတဲ့ အဆိပ် ပမာဏ ဟာ လူတယောက်ကိုသေစေနိူင်တယ် ။ ဒါကြောင့် အင်ဒီးယန်း အနွယ်ဝင် အမေရိကန် သားများဟာ ဒီအဆိပ်ကို blow-darts ခေါ် မှုတ်လို့ရတဲ့ မျှားလေးတွေအပေါ်မှာ သုတ်လိမ်းပြီး လက်နက်အဖြစ် အသုံးပြုကြတယ် ။
Puffer Fish လို့ ခေါ်တဲ့ ငါးလေးဟာလည်း နှုတ်ခမ်းလေးထော်လို့ ချစ်စဖွယ် အသွင်ရှိ် ပါတယ် ။ကျောရိုးရှိ သတ္တဝါ တွေထဲ ဒုတိယမြောက် အဆိပ်ပြင်းတဲ့ အကောင်ပေါ့ ။ ပထမ က ( golden dart Frog) လေ ။ ဂျပန် နဲ့ ကိုးရီးယား လူမျိုးတွေ ကတော့ သူ့ အသားကို စားသုံးလေ့ ရှိကြတယ် ။ ဂျပန်လို fugu ၊ ကိုရီးယားက bok-uh လို့ ခေါ်ဆိုကြတယ် တဲ့ ။ သူ့ ရဲ့ အရေခွံ နဲ့ ကလီစာ တွေမှာ အဆိပ်ပါရှိတတ်တယ်။ စားမိရင် နှုတ်ခမ်း နဲ့ လျှာ တွေ မာပြီး မူးတယ်၊အန်တယ် ၊ နှလုံးခုန် မြန်တယ်၊ အသက်ရှူခက်ခဲပြီး ကြွက်သားတွေ တုန့် ဆိုင်းစေတယ် ၊ ရင်ခေါင်းနဲ့ ဝမ်းခေါင်းကြားမှာ ရှိတဲ့ diaphragm ကြွက်သား တုန့်ဆိုင်းပြီး အသက်ရှုရပ်ကာ ၄ နာရီမှ ၂၄ နာရီ အတွင်းသေဆုံးစေနိုင်သည် ။ အဆိပ်ဖြေဆေး မရှိသေးပါကြောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၁၉၉၆ မှ ၂၀၀၆ အတွင်း အဆိုပါငါး အဆိပ်သင့်မှုကြောင့် တနှစ်မှာ သေဆုံးသူ ၂၀ မှ ၄၄ ဦး ထ်ိရှိခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းများအရ သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲ့ဒီငါးကို ကျွမ်းကျင်သူများက သာ ဖမ်းဆီးပြီး ၊ ကိုင်တွယ် ချက်ပြုတ် စေရန် လိုင်စင်ရှိသူ စဖိုမှုးများကိုသာ ခွင့် ပြု ထားတယ် လို့ သိရပါတယ် ။
(ကိုယ်သာဆို ဘယ်လောက်စားကောင်းတဲ့ အသားငါးဖြစ် ပစေ ၊ဘယ်လောက် ကျွမ်းကျင်သူတွေ ချက်ပြုတ် ကျွေးပစေ ၊ မစားပါဘူး၊ ဒါမျိုးတော့ ကြောက် စ် ။ ပုံ ကြည့်ရတာ တော့ ငါးပူတင်းနဲ့ ဆင်သလိုပဲ ။ ဟုတ် ။ )
ဒီနေရာမှ ရတဲ့ အကြောင်းအရာများပါ ။
ဒီစိမ်းစိမ်းကြီးကရော ... ဘယ်လောက်များ အဆိပ်ပြင်းပါလိမ့် ။ သိသူများ ပြောပြကြပါ ။း) ။
အယ် .. ဘယ်သူမှ သိမယ်မထင်ဘူး ။ ဟုတ် တယ် ဟုတ် ။
မထိရ ၊ မကိုင်ရ ၊ မပြောရ ၊ မအော်ရ ။ မရေးရ ၊ မဖတ်ရ ။ မလှုပ်ရ ၊ မကြွရ ။
ရှောင်ကြ ရှားကြ ဝေးဝေးမှ ၊ အဆိပ်သင့်ခြင်းကင်းမည်ပ ၊
( အားလုံး သတိ် ၊ အဆိပ်ဖြေဆေး ရှာမတွေ့ သေးပါ ။)
နှစ်သစ်မှာ အဆိပ်ကင်းစွာ ဖြင့် ပျော်ရွှင် ရှင်သန် နေနိုင်ကြပါစေ ။
:kiki : at 1/10/2010 08:55:00 PM
များပြားလှစွာသော ကင်ဆာရောဂါများထဲမှ အတော်များများဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော အူမကြီးကင်ဆာ အကြောင်းကို ကိုဇော်(ခြေလှမ်းသစ်) က သိလိုပါတယ် ဆိုလို့လက်...